Limber tail tail amin'ny alika | Alika Manerantany
Androany isika dia hiresaka lohahevitra mifandraika amin'ny biby fiompintsika, Limber tail tail, izay voalaza tamin'ny fikarohana vao haingana tao amin'ny University of Edinburgh fa ny génétique sy ny jeografia dia mety ho antony mampitombo ny fahafaha-mijaly amin'izany.
1 Inona no atao hoe Limber Tail Syndrome?
2 Famantarana fa manana ny aretina ny biby fiompinao
3 Misy vokany hafa koa izany:
4 Inona avy ireo anton-javatra misy fiatraikany amin'ny fisehoan'ny Limber's tail syndrome
5 Alika miasa ve no mety hampivelatra ny sindromina?
6 Manana fanasitranana ve ilay aretina?
7 Ireto misy sosokevitra vitsivitsy:
Inona no atao hoe Limber Tail Syndrome?
Aretin-kozatra io, hita eo am-pototry ny rambon'ny alika izay manakana ny fivezivezena alika mahazatra ary miteraka fanaintainana be, dia fantatra koa amin'ny hoe aretina mangatsiaka amin'ny rambony.
Famantarana fa manana ny aretina ny biby fiompinao
Ho hitanao fa ny iray amin'ireo famantarana miharihary dia izany miala amin'ny fotony ny rambon'ny alika ary noho izany dia mitazona azy io na dia mihetsika aza, izay tena tsy mahazatra amin'ireo biby ireo izay mampiseho tsara ny fihetsem-pony amin'ny alàlan'ny fanetsiketsika ny rambony.
Misy vokany hafa koa izany:
Fahasarotana mandeha, tsy fitoviana amin'ny vatana
Mampiseho tsy mahazo aina amin'ny poop, manalavitra azy araka izay azo atao
Lasa mipetrapetraka, misoroka ny diany
Manana olana amin'ny fitadiavana toerana mety aminao ianao
Hamarino tsara fa ny alikanao dia tsy nanao hetsika izay nandratra azy tato ho ato ary ny antony mahatonga ny fanaintainana dia hafa.
Inona avy ireo anton-javatra misy fiatraikany amin'ny fisehoan'ny Limber's tail syndrome
Tsy mbola misy iray 100% antoka fa mamokatra azy ioRaha ny marina, mbola misy ny fikarohana momba io lohahevitra io, na izany aza, ireto misy antony sasany mety handinihana:
Famoahana ny alika amin'ny maripana mangatsiaka be
Milomano anaty rano mangatsiaka be
Mijanona maharitra amin'ny toerana kely dia kely
Fanatanjahan-tena be dia be
Alika miasa ve no mety hampivelatra ny sindromina?
Miorina amin'ny fikarohana teo aloha, dia hita fa biby manao asa ivelan'ny trano toy ny fihazana, ny fanarahan-dia ary izay misy hetsika ara-batana be dia be amin'ny ankapobeny ary koa ireo milomano betsaka dia mora mampivoatra azy in-5 mihoatra ny ambin'ny amboa; Toy izany koa, arakaraka ny ahatongavan'ny biby any avaratra dia mety hitera-doza kokoa noho io aretina io ianao.
Fa raha miara-miaina amin'ny biby fiompinao amin'ny faritra mangatsiaka ianao, aza matahotra ny mandeha an-tongotra miaraka aminy, tadidio fotsiny ny fandraisana fepetra toy ny tsy fanitarana loatra ny dia an-tongotra, rehefa tonga maina ianao any an-trano ary manome tontolo mafana ho an'ny alikanao. Ilaina koa ny fanaovana fanatanjahan-tena ho an'ny alikanao ka tokony tsy hijanona manao izany ianao, fa mitandrema ihany.
Manana fanasitranana ve ilay aretina?
Soa ihany fa tsy matotra izy io, raha misy fanasitranana ary haingana ny fanarenana, ampirisihina hatrany handeha any amin'ny mpitsabo biby raha sendra misy soritr'aretina na alika hafa amin'ny alika misy anao, dia vao maika tsara kokoa hisorohana ny fahasarotana.
Ireto misy sosokevitra vitsivitsy:
Rehefa mitondra ny alikanao any amin'ny toeram-pitsaboana dia alao antoka miaraka amin'ilay manam-pahaizana manokana fa tsy misy aretina hafa misy fiatraikany amin'ny biby fiompy, tandremo fa manao ny azy rehetra izy ireo famakafakana, taratra x, ra ary fizahana ara-batana tanteraka.
Alohan'ny hanomezana fanafody anti-milaza zavatra sasany Anontanio foana ny mpitsabo anao ny zavatra atolotra ho an'ny alikao, ny fotoana fitsaboana ary ny fatra, azonao atao aza ny manisy compresses mafana amin'ny fototr'ilay rambony rehefa manampy amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny hozatra ary manamaivana ny tsy fahazoana aina.
Hamarino tsara fa miadana be ny biby fiompinao, ny tsy mahazo aina angamba no mitady hikatsaka azy hiala sasatra, raha tsy izany miezaha hitazona azy ho tony araka izay azo atao afaka mihatsara tsy ho ela aho
Ity aretina ity tsy dia fahita any amin'ny toetrandro mafana, fa mety hitranga amin'ny alika izay manana fangatahana ara-batana be dia be ao anatin'izany ny filomanosana ary mety hitranga fa ny mpitsabo anao dia tsy mamaritra mora foana ny aretin'ny alikao, koa tadidio izay novakianao tato amin'ity lahatsoratra ity ary raha toa ka manana ny sakafonao soritr'aretina miharihary, tariho ny dokotera, lazao ny patolojia mba hanatsarana haingana ny biby fiompinao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Limber tail tail amin'ny alika
sahira dia hoy izy:
Salama, manana alika mpiompy Fila Brasileiro aho ary efa ho roa herinandro lasa izay izay nandeha an-tongotra tampoka, nanomboka nandinika azy izahay ary mino fa avy amin'ny rambony io satria matetika rehefa faly izy io dia mampihetsika mafy azy ary tongava mifikitra amin'izay andalovany. Miezaka manaikitra azy saingy tsy avelany hahatratra azy ny habeny, na izany aza mikiakiaka izy rehefa manelingelina na mihetsika tampoka. Amin'ity tranga ity dia tsy haintsika ny manasitrana azy satria somary masiaka ny toetrany hitondra azy any amin'ny mpitsabo ary manasitrana azy tsy dia mampaninona izany.
Faly aho raha afaka mitarika ahy ny zavatra tokony hatao misaotra anao !!!!
Mamaly an'i Sahira
Ahoana ny fomba hampitoniana ny tahotra ny afomanga amin'ny alika